Museveni orders flags to be flown at half mast to mourn Burundi’s dead President Nkurunziza – Watchdog Uganda
Museveni orders flags to be flown at half mast to mourn Burundi’s dead President Nkurunziza
President Yoweri Museveni has ordered that the Uganda Flag and that of the East African Community be flown at half mast to mourn Burundi’s President Pierre Nkurunziza who passed on this week.
President Museveni who in his condolence message to the people of Burundi described Nkurunziza as a true friend to Uganda, said the deceased strive for the integration of East Africa.
“President Nkurunziza was a true friend of Uganda and a champion of East African Integration,his country and region will miss his talents and invaluable contribution he was well positioned to make towards the consolidation of peace and stability in Burundi and in the region, following his departure from office in a few months time,”Museveni said.
Adding,” As an expression of our solidarity with the government and people of Burundi, and as a mark of respect for the memory of President Nkurunziza, I hereby order that the flag of the Republic of Uganda and that of East African Community be flown at half mast throughout Uganda and at all Ugandan embassies and consular offices abroad from tomorrow the 13th June 2020 until burial. ”
Nkurunziza died of heart attack on Tuesday.
In a statement posted on Twitter, the government announced “with great sorrow to Burundians and the international community” the passing of Nkurunziza, 55.
IN PHOTOS: Gen Kasirye Ggwanga final send off
18th September 2019 at 08:46
1st August 2020 at 09:50